Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio A2 - Izincwadi +
Izincwadi Zokusebenzisa Zenziwe Lula.
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio A2
August 24, 2020 August 24, 2020 Shiya amazwana ku-Bluedio A2 Manual Manual
Ikhaya » I-Bluedio » Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio A2
Uyemukelwa ekhanda lakho elisha le-Bluedio
Sithokozela ukukhetha kwakho kwamahedfoni we-Bluedio. Ngaphambi kokuyisebenzisa, sicela ufunde le ncwajana yomsebenzisi ngokucophelela bese uyigcinela inkomba ezayo.
Ungathola ikhodi yokuqinisekisa ngokususa ukumboza kwelebula lokuphepha okunamathiselwe kupakethe langempela. Faka ikhodi kuwebhusayithi yethu esemthethweni: www.bluedio.com ukuze uqinisekise ukuthenga.
Funda kabanzi futhi uthole ukwesekwa
Uyemukelwa ukuvakashela iwebhusayithi yethu esemthethweni: www.bluedio.com;
Noma ukusithumela i-imeyili [i-imeyili ivikelwe];
Noma ukusishayela ku-020-86062626-835.
Ulwazi Olubalulekile Lwezokuphepha
UNGAYisebenzisi amahedfoni ngevolumu ephezulu nganoma isiphi isikhathi esandisiwe ukuvimbela ukulimala kokuzwa.
UNGAYisebenzisi ihedfoni ngenkathi ushayela noma kunoma iyiphi indawo edinga ukunakekelwa okugcwele. Uma kunesidingo, sebenzisa ama-headphone wokuxhumana we-Bluedio.
Gcina ama-headphone ka-Ole, izesekeli nezingxenye zokupakisha kude lapho izingane zingafinyelela khona ukuvikela izingozi nezingozi zokuminyaniswa.
YEKA ukusebenzisa amahedfoni ngokushesha uma uzizwa ugula ngenkathi usebenzisa amahedfoni.
UNGABEKELI ama-headphone ka-Ole emazingeni okushisa aphezulu kakhulu noma aphansi (ekahle: 1 O ”C kuye ku-35 ″ C).
Gcina amahedifoni omile njalo futhi UNGAYisebenzisi amahedfoni ngasemanzini.
Ukususwa kwebhethri lika-Ole elikhokhiswayo kumahedfoni we-Ole kuzokwenziwa kuphela nguchwepheshe oqeqeshiwe. UNGAZAMI ukubuyisela ibhethri uwedwa.
Ukubuka konke kwehedfoni
Ukuvula amandla: Cindezela bese ubamba inkinobho ye-MF kuze kukhanye ngokushesha okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Cisha amandla: Cindezela bese ubamba inkinobho ye-Ole MF kuze kufike u-U, ukukhanya okwesibhakabhaka kukhanye ngokushesha bese kuyacima.
Ukumatanisa: Uma ama-headphone evaliwe, cindezela bese ubamba inkinobho ye-MF uze ubone ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuka-Ole kuhlala kukhanya.
Lapho udlala umculo, cindezela inkinobho ye-MF kanye ukuze ume isikhashana / udlale;
Ukuthola ucingo olungenayo, cindezela inkinobho MF kanye ukuze Uphendule / Uphele; Cindezela bese ubamba imizuzwana emi-2 ukwenqaba;
Ukuthola Ucingo 2 ku-Call 1, cindezela bese ubamba inkinobho ye-MF ukubamba ku-Call 1 bese uphendula u-Call 2; cindezela bese ubamba futhi ukushintshela ku-Call 1; cindezela kanye ukuvala ucingo;
Cindezela inkinobho MF kabili ukuphinda ushayele inombolo yokugcina.
Lapho kufika ucingo, amahedfoni azosakaza ngokuzenzakalela inombolo yocingo.
Yenza ama-headphone angene kumodi yokubhangqa (bheka imiyalelo “inkinobho ye-MF”), bese uvule isici se-Bluetooth sefoni yakho, ukhethe u- “A • (faka u-“ oooo ”uma kunesidingo). Ngemuva kokubhangqa ngempumelelo, uzobona ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokuzayo vula amahedfoni kanye nesici se-Bluetooth sefoni yakho, sizoxhuma ngokuzenzakalela kufoni yakho.
Qaphela: Uma ukumatanisa kungaphumeleli kungakapheli imizuzu engu-2, sicela uphinde izinyathelo ezingaphezulu ukuze ubhanqe futhi.
IVolumu- / Ithrekhi edlule
Cindezela kanye ukunciphisa ivolumu; cindezela bese ubamba ukweqa uye kwingoma eyedlule.
IVolumu + / ithrekhi elandelayo
Cindezela kanye ukukhulisa ivolumu; cindezela bese ubamba ukweqa uye kwingoma elandelayo.
Vula amahedfoni kuqala. bese ucindezela inkinobho ye-MF nenkinobho yevolumu- ndawonye kanye, izokhipha ithoni esheshayo ehlobene. Kukhona izilimi ezine ezitholakalayo, kufaka phakathi isiShayina, isiNgisi, isiFulentshi neSpanishi.
Tum / vala umsindo we-3D
ON: Cindezela inkinobho yeVolumu + neVolumu- kanye kanye;
VALIWE: Lapho umsindo ongu-30 uvuliwe, cindezela inkinobho ye-Volume + ne-Volume- kanye kanye.
Ukudlala ngomugqa komculo
Sebenzisa ikhebula lomsindo elijwayelekile elingu-3.5mm ukuxhuma amahedfoni nefoni yakho ephathekayo noma ikhompyutha.
Qaphela: Thuma amahedfoni ngaphambi kokusebenzisa lesi sici.
Ukudlala komculo okulayishiwe
Uma udlala umculo ngeBluetooth, sebenzisa ikhebuli yomsindo engu-3.5mm ukuxhuma u-A namanye amahedfoni.
Xhuma kumaselula amabili nge-Bluetooth
Xhuma u-A nefoni 1, bese ucisha u-A nesici se-Bluetooth sefoni 1.
Vula u-A bese uyenza ingene kumodi yokumatanisa.
Xhuma u-A ngefoni 2.
Vula isici se-Bluetooth sefoni 1, khetha u- “A” ohlwini lwe-Bluetooth.
Ikhebuli yokushaja: sicela usebenzise ikhebuli yokushaja ye-USB efakiwe ukushaja ibhethri, noma ingalimaza amahedfoni.
Ishaja yodonga lwe-USB: uma usebenzisa ishaja yodonga lwe-USB, okukhiphayo kudinga i-5VDC,> 0.4A.
Ibhethri elakhelwe ngaphakathi liyakwazi ukugcwaliseka futhi alikwazi ukuxhumeka. Ungazami ukufaka ibhethri esikhundleni sakho uwedwa.
Cisha amahedfoni ngaphambi kokushaja.
Sebenzisa ikhebuli yokushaja ye-USB efakiwe ukuxhuma amahedfoni ngekhompyutha noma ishaja yodonga. Ngenkathi ishaja, ilambu elibomvu lihlala livulekile.
Vumela amahora angu-2 ukukhokhiswa ngokugcwele. Uma isishajwe ngokugcwele, ilambu eliluhlaza okwesibhakabhaka lizohlala likhanya.
Inguqulo ye-Bluetooth: 4.2
Imvamisa yokudlulisa i-Bluetooth: 2.4GHz kuya ku-2.48GHz
Ibanga lokusebenza le-Bluetooth: kufika ezinyaweni ezingama-33 (isikhala samahhala)
Amaphrofayli e-Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Impendulo yemvamisa: 20Hz-20,000Hz
Ukulungiswa komsindo: [i-imeyili ivikelwe]
Abashayeli: <1> 57mm
Ukuhlanekezelwa okuphelele kweHarmonic (THD): 0.3% -3%
Izinga Lokucindezela Komsindo (SPL): 118dB
Isikhathi sokulinda: cishe amahora angama-1300
Isikhathi se-Bluetooth somculo / sokukhuluma: cishe amahora angu-33
Isikhathi sokushaja: amahora we-2 ngokukhokhiswa okugcwele
Ukusebenza kwebanga lokushisa: -10, C kuya ku-50, C kuphela
Ukushaja i-voltage / yamanje: 5V /> 400mA
Amandla wokukhipha: 25mW + 25mW
Imininingwane ingashintsha ngaphandle kwesaziso.
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio A2Thwebula
Imibuzo ngeManuwali yakho? Thumela kumazwana abekiwe!
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio Hi Imodeli Yemanuwali Yomsebenzisi: IBluedio-Hi Imiyalo Yesakhiwo Sokusebenza Komdwebo: Ukubhangqa ...
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio AS Model USER MANUAL Bluedio Somlomo: AS Siyakwamukela ku ...
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio US Model USER MANUAL Bluedio Somlomo: US Siyakwamukela ku ...
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio TS3 IModeli Yomsebenzisi we-USER MANUAL Bluedio Somlomo: TS3 Siyakwamukela ku ...
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio T2 IModeli ye-USER MANUAL Bluedio Wired Headset: T2 Bluetooth 4.1 Amahedisethi ...
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio Ai I-USER MANUAL Bluedio Headphones Model: Ai Siyakwamukela ku ...
August 24, 2020 August 24, 2020 Posted inI-BluedioTags: A2, I-Bluedio, IBluedio A2, incwadi yomsebenzisi
Thumela Previous Post Previous:
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio US
Post Next Post Next:
Ibhukwana Lomsebenzisi we-Bluedio T4S
Umhlahlandlela Womsebenzisi we-iiglo 1158870 MX Multi Wireless Mouse
BODUM 12069-01 MELIOR Incwadzi Yekufundzisa Ye-Air Fryer
Incwadzi Yomsebenzisi We-Proctor Silex 35056 3.7 Quart Air Fryer
Imanuwali Yomsebenzisi we-XTREME XWC8-1006-BLK Desktop Engenantambo
I-BELLA 17160 2 QT Air Fryer Instruction Manual
admin on Ibhukwana Lomnikazi wePanasonic Blu-ray Disc Player
UJimmy Enriquez on I-LOVENSE Lush 3 Bullet Vibrator Incwadi Yomsebenzisi
UBrett M Caliman on I-Samsung French Door Refriji ene-Family Hub ne-External Water & Ice Dispenser Instruction Manual
UBonnie Eborn on I-TCL-4056L FLIP Umhlahlandlela Womsebenzisi Wefoni
Gianni on Imiyalo yekhibhodi ye-OMOTON